Bit By Bit - အပြေးစမ်းသပ်ချက် - 4.1 နိဒါန်း
ဤစာအုပ်ကို-စောင့်ကြည့်အပြုအမူ (အခန်း 2) နှင့်မေးခွန်းများမေး (အခန်း 3) တွင်ယခုအထိဖုံးလွှမ်းချဉ်းကပ်ခုနှစ်တွင် -researchers ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့စနစ်တကျကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲနေစရာမလိုဘဲဒေတာစုဆောင်းပါ။ အဆိုပါချဉ်းကပ်မှုအခြေခံကျကျကွဲပြားခြားနားသောဤအခနျး-running-ဖြစ်ပါတယ်စမ်းသပ်ချက်များတွင်ဖုံးအုပ်လေ၏။ သုတေသီများစမ်းသပ်ချက်ကို run တဲ့အခါသူတို့ကစနစ်တကျထွက်ရှိသောအကြောင်းမရှိ-and effect ကိုဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းမှကိုက်ညီကြောင်းဒေတာကိုဖန်တီးရန်ကမ္ဘာပေါ်မှာ်ရောက်စွက်ဖက်။
စေ-and effect ကိုမေးခွန်းများကိုလူမှုရေးသုတေသနအတွက်အလွန်ဘုံဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဥပမာကဲ့သို့သောမေးခွန်းများကိုပါဝင်သည်: ကျောင်းသားသင်ယူမှုတိုးမြှင့်ဆရာလစာတိုးမြှင့်ပါသလား? အလုပ်အကိုင်အနှုန်းအပေါ်နိမ့်ဆုံးလုပ်အားခ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကဘာလဲ? ဘယ်လိုအလုပ်လျှောက်ထားသူရဲ့ပြိုင်ပွဲအလုပ်တစ်ခုရတဲ့သူမရဲ့အခွင့်အလမ်းကိုထိခိုက်သနည်း? ဤအအတိအလင်းကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မေးခွန်းများကိုအပြင်, တစ်ခါတစ်ရံဖြစ်ပေါ်စေ-and effect ကိုမေးခွန်းများကိုအချို့စွမ်းဆောင်ရည်မက်ထရစ်၏အကျယ်ချဲ့အကြောင်းပိုမိုယေဘုယျမေးခွန်းများကိုအတွက်သွယ်ဝိုက်ဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, မေးခွန်းက "button ကိုတစ်ဦးအန်ဂျီအိုရဲ့ website တွင်ဖြစ်ကဘာလဲအရောင်လှူဒါန်းသင့်သလဲ" တကယ်အလှူငွေများအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသော button ကိုအရောင်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းမရှိ-and effect ကိုမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်တလမ်းတည်းဖြင့်ရှိပြီးသားဒေတာအတွက်ပုံစံများကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကျောင်းသားသင်ယူမှုအပေါ်ဆရာလစာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းပြန်, သငျသညျကျောင်းသားများကိုမြင့်မားတဲ့ဆရာမလစာပူဇော်ကြောင်းကျောင်းများအတွက်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူကြောင်းတွက်ချက်ပေလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ဒီဆက်စပ်မှုပိုမိုမြင့်မားလစာကျောင်းသားများကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူစေကြောင်းပြသသနည်း? ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ ဆရာ, ဆရာမပိုပြီးဝင်ငွေဘယ်မှာကျောင်းများနည်းလမ်းများစွာအတွက်ကွဲပြားခြားနားပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, မြင့်သောဆရာမလစာနှင့်အတူကျောင်းများတွင်ကျောင်းသားများကချမ်းသာတဲ့မိသားစုကလာပေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်အဘယ်အရာကိုဆရာ, ဆရာမတစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်မှုတူရုံကျောင်းသားများကို၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းမှလာနိုင်ဘူး။ ကျောင်းသားများကိုအကြားဤရွေ့ကား unmeasured ကွဲပြားခြားနားမှုယေဘုယျအားဖြင့်ရှက်ကြောက်၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပြီးသားဒေတာအတွက်ပုံစံများကိုရှာဖွေနေသဖြင့်အကြောင်းရင်း-and effect ကိုမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်သုတေသီများ '' စွမ်းရည်အပေါ်ဖျက်ဆီး wreaks, ရှက်ကြောက်ချေါပွီးနေကြသည်။
ရှက်ကြောက်၏ပြဿနာတစ်ခုမှာဖြေရှင်းချက်အုပ်စုများအကြား observable ကွဲပြားမှုများအတွက်ချိန်ညှိခြင်းဖြင့်တရားမျှတစွာနှိုင်းယှဉ်စေရန်ကြိုးစားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်အစိုးရဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏နံပါတ်ကနေအိမ်ခြံမြေအခွန်ဒေတာကို download လုပ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်သင်သည်နေအိမ်စျေးနှုန်းများဆင်တူပေမယ့်ဆရာမလစာကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်ဆဲကျောင်းသားများကိုပိုမိုမြင့်မားဆရာမလစာနှင့်အတူကျောင်းများအတွက်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူကွောငျးတှေ့စခွေငျးငှါအဘယ်မှာရှိကျောင်းများတွင်ကျောင်းသားစွမ်းဆောင်ရည်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်အများကြီးဖြစ်နိုင်သမျှရှက်ကြောက်နေတုန်းပဲရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းသည်ဤကြောငျးသားမြား၏မိဘများပညာရေးသူတို့ရဲ့အဆင့်ကွာခြား။ ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းတွေအများပြည်သူစာကြည့်တိုက်များ၎င်းတို့၏ရငျးနှီးမှုအတွက်ကွာခြား။ ဒါမှမဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားဆရာမလစာနှင့်အတူကျောင်းများတွင်လည်းကျောင်းအုပ်များအတွက်ပိုမိုမြင့်မားလစာရှိသည်, ကျောင်းအုပ်ကြီးလစာမဟုတ်ဘဲဆရာလစာ, ကျောင်းသားသင်ယူမှုတိုးပွားလာဘာကိုတကယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာသည်ဤအချက်များအဘို့ကိုတိုင်းနှင့်ချိန်ညှိဖို့ကြိုးစားနိုင်ပေမယ့်တတ်နိုင်သမျှရှက်ကြောက်၏စာရင်းကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အဆုံးမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ များစွာသောအခြေအနေများတွင်, သင်ရုံကိုတိုင်းတာမရနိုင်အပေါင်းတို့နှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှက်ကြောက်ဘို့ညှိ။ ဒီစိန်ခေါ်မှုကိုတုံ့ပြန်ခုနှစ်, သုတေသီများငါဒေတာ-ခနျးမှာသူတို့ထဲကအချို့ဆွေးနွေးတင်ပြ 2-ဒါပေမယ့်မေးခွန်းများကိုအချို့မျိုးစုံတို့အတွက်ဤနည်းစနစ်ကန့်သတ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုအလားအလာပူဇော် Non-စမ်းသပ်ရာမှကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ခန့်မှန်းအောင်များအတွက်နည်းစနစ်များစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးကြပါပြီ အခြားရွေးချယ်စရာ။
စမ်းသပ်ချက်သဘာဝကျကျယုံကြည်စိတ်ချရသောအချို့သောအကြောင်းမရှိ-and effect ကိုမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုနိုင်ရန်အတွက် data တွေကိုဖြစ်ပေါ်အတွက်ဆက်စပ်မှုကျော်လွန်ရွှေ့ဖို့သုတေသီများကို enable ။ အဆိုပါ Analog စအရွယ်များတွင်စမ်းသပ်ချက်မကြာခဏပို့ဆောင်ထောက်ပံ့ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များခက်ခဲများနှင့်စျေးကြီးရှိကြ၏။ အခုတော့ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်အတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအခက်အခဲတဖြည်းဖြည်းကွယ်ပျောက်နွမ်းနေကြသည်။ မသာပါကအတိတ်ကာလ၌ပြစ်မှားမိသူကဲ့သို့စမ်းသပ်လုပ်ဖို့ပိုမိုလွယ်ကူသည်ကစမ်းသပ်ချက်သစ်အမျိုးမျိုးကို run ဖို့ယခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ငါယခုအချိန်အထိတိကျမ်းစာ၌လာသည်င့်အဘယျသို့ခုနှစ်တွင်ငါသည်ငါ၏ဘာသာစကားမှာနည်းနည်းချောင်ရောက်ခဲ့ဖူးပေမယ့်အရာနှစ်ခုအကြားခွဲခြားရန်အရေးကြီးပါသည်: စမ်းသပ်ချက်များနှင့် randomized ထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်ချက်။ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှာတော့တစ်သုတေသီကမ္ဘာပေါ်မှာ intervenes ပြီးတော့တစ်ဦးရလဒ်ကိုတိုင်းတာသည်။ ကျွန်မအဖြစ်ဖော်ပြထားဒီချဉ်းကပ်မှုကြားဖူးတယ် "အထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းနှင့်စောငျ့ရှောကျ။ " ဟုသုတေသီတခြားသူတွေကိုအချို့လူများနှင့်မ intervenes, နှင့်သုတေသီလူတွေ (ဥပမာ, တစ်ဦးအကြွေစေ့လှန်လှော) Randomization အားဖြင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုခံယူသောဆုံးဖြတ်တဲ့ randomized ထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်မှု၌။ အဆိုပါဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမဟုတျဘဲရှိပါတယ်တစ်ခုလက်ခံရရှိခဲ့သည်တစ်ခု: randomized ထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်ချက်အုပ်စုနှစ်စုအကြားမျှတနှိုင်းယှဉ်ဖန်တီးပါ။ တနည်းအားဖြင့် randomized ထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်ချက်ရှက်ကြောက်၏ပြဿနာများအဖြေတစ်ခုရှိပါတယ်။ စမ်းသပ်ချက်ကိုစောင့်ရှောက်မည်ထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်း-and သို့သော်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလက်ခံရရှိခဲ့သည်သာတစ်ခုတည်းအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကြောင့်ရလဒ်မှားနိဂုံးချုပ် (ကျနော်မကြာမီပြသပါလိမ့်မယ်ကဲ့သို့) မှသုတေသီများဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ စမ်းသပ်ချက်များနှင့် randomized ထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်ချက်များအကြားအရေးကြီးတဲ့ခြားနားချက်နေသော်လည်းလူမှုရေးသုတေသီများမကြာခဏအပြန်အလှန်ဖလှယ်ဤဝေါဟာရများကိုအသုံးပြုပါ။ ငါဒီစည်းဝေးကိုလိုက်နာပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်, အချို့အချက်များမှာငါ Randomization နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုခြင်းမရှိဘဲစမ်းသပ်ချက်ကျော် randomized ထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်ချက်၏တန်ဖိုးကိုအလေးပေးဖို့စည်းဝေးကြီးကိုချိုးဖျက်ပါလိမ့်မယ်။
randomized ထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်ချက်လူမှုကမ္ဘာကြီးအကြောင်းသင်ယူရန်အစွမ်းထက်လမ်းဖြစ်သက်သေပြခဲ့ကြ, ဤအခနျးမှာ, ငါသည်သင်တို့၏သုတေသနအတွက်သူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းသင်ပိုမိုပြသပါလိမ့်မယ်။ အပိုင်း 4.2 မှာတော့ငါဝီကီပီးဒီးယားတခုတခုအပေါ်မှာစမ်းသပ်မှုတခုဥပမာစမ်းသပ်ခြင်း၏အခြေခံယုတ္တိဗေဒသရုပျဖျောပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်အပိုင်း 4.3 ၌ငါဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်များနှင့်လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်နဲ့ Analog စမ်းသပ်ချက်များနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်များအကြားခြားနားချက်များအကြားခြားနားချက်ကိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့ပြင်ငါဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်အားလုံးယခင်ကမဖြစ်နိုင်ပါကြီးတဲ့စကေးမှာ, Analog စဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက် (တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်မှု) နဲ့ Analog လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက် (သရုပ်မှန်) ၏အကောင်းဆုံး features တွေကိုပူဇော်နိုင်မငြင်းပါလိမ့်မယ်။ ယင်းနောက်အပိုင်း 4.4 ၌ငါသုံးသဘောတရား-တရားဝင်မှု, ကုသမှုဆိုးကျိုးများနှင့်ယန္တရားများ-ကြောင်းကြွယ်ဝသောစမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်းများအတွက်အရေးပါများမှာ၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်လုပ်နေတာသို့မဟုတ်အင်အားကြီးနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. : ကြောင်းနောက်ခံနှင့်အတူငါဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်မှုများအတွက်နှစ်ခုအဓိကမဟာဗျူဟာများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့် trade-off ကိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါသည်သင်တို့ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက် (အပိုင်း 4.6.1) ၏အစစ်အမှန်အာဏာအားသာချက်ကိုယူပြီးအာဏာ (အပိုင်း 4.6.2) နှင့်တကွကြွလာသောတာဝန်အချို့ကိုဖော်ပြရန်နိုငျပုံအကြောင်းကိုအချို့သောဒီဇိုင်းအကွံဉာဏျနှင့်အတူကောက်ချက်ချပါလိမ့်မယ်။